Enwere m ike Naghachi Data si G-Technology mpụga ike mbanye?
Usoro G-Technology mpụga ike mbanye Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
M nwere G-Technology 500G G-Drive Obere mpụga ike mbanye, nke e dere ọtụtụ n'ime m bara uru foto na vidiyo na ya. Taa, m na carelessly ehichapụ ụfọdụ n'ime ha na m na-adịghị ihe ọ bụla ndabere. Ugbu a, m dị nnọọ mkpa iji nweta ihe m na-ehichapụ faịlụ azụ na mbanye. Nwere ike onye na-enyere m biko?
Ọ bụ ezie na G-Technology mpụga ike mbanye bụ ngwa ngwa na mma, ọ bụ ruo mgbe-apụghị izere ezere na-data ọnwụ. Files na ya nwere ike furu efu n'ihi na gị kpachaara anya ma ọ bụ na mberede nhichapụ, na-ezighị ezi na ime ihe, formatting, virus agha na ọbụna usoro njehie. Agbanyeghị, na-ehichapụ faịlụ ndị ka na gị G-Technology mpụga ike mbanye. Ha na-dị nnọọ akara dị ka keerughi data site usoro. Ozugbo ọhụrụ data na draịvụ ike gị na-edochi ha, ha ga-efu na-adịgide adịgide mgbe ahụ. Ya mere, Ohere inweta bụ oké nke na-agbake faịlụ site na G-Technology mpụga ike mbanye dị ka ogologo oge ị na-adịghị eji gị mbanye ọzọ ma na-omume ozugbo.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ ihe magburu onwe G-Technology mpụga ike mbanye data mgbake ngwá ọrụ na-enyere gị gbapụta gị furu efu data na ala. Ọ bụ ike naghachi ehichapụ, furu efu, Ị na rụrụ arụ faịlụ site na gị G-Technology mfe. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na a G-Technology mpụga ike mbanye ụdị. Site na iji ya ị ga-azụ faịlụ dị ka photos, videos, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ na ndị ọzọ.
Ebe a anyị na-Wondershare Data Recovery maka Windows dị ka ihe atụ. Mac ọrụ biko na-Mac version hazie mgbake na yiri arụmọrụ.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode na-amalite G-Technology mpụga ike mbanye data mgbake
Mgbe na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery maka Windows, ị ga-nyere na 3 mgbake ụdịdị.
Naghachi ehichapụ ma ọ bụ formatted faịlụ site na gị G-Technology mpụga ike mbanye, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" dị ka a mbụ na-agbalị.
Cheta na: Biko hụ na gị na G-Technology mpụga ike mbanye nwere ike ghọtara dị ka a ike mbanye na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị G-Technology mpụga ike mbanye anya n'ihi na furu efu faịlụ
Ebe a ị dị nnọọ mkpa iji họrọ mbanye gị G-Technology mpụga ike mbanye na pịa "Malite" ka iṅomi furu efu data.
Ọ bụrụ na faịlụ na-formatted si gị G-Technology mpụga ike mbanye, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na G-Technology mpụga ike mbanye
Niile hụrụ faịlụ gị G-Technology mpụga ike mbanye ga-egosipụta na "File Ụdị" & "Ụzọ" edemede ke window.
Ị dị nnọọ mkpa akara faịlụ na ị chọrọ iji weghachite si gị G-Technology draịvụ ike na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha azụ gị na kọmputa.
Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta natara data azụ gị G-Technology mpụga ike mbanye ozugbo mgbe mgbake.
PSD File Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ PSD Files
> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi G-Technology mpụga ike mbanye Data Recovery